Akụkụ eriri afọ
Ngwa Ngwa Mgbapụta Acid Acid
SARS-CoV-2 Ihe Na-achọpụta Acid Acid
Animal anụmanụ kitic acid nchọpụta kit
A na-eji ngwaahịa a maka nchọpụta ngwa ngwa na nyocha nke ọrịa anụmanụ.
Pathogenic Microorganism nchọpụta kit
Usoro a bu ngwaahịa nke "NAVID", ulo oru nne na nna nke gene Janma.
A na-eji ngwaahịa a maka nchọpụta ngwa ngwa na nyocha nke microorganisms na-akpata nri dị ka staphylococcus aureus, Escherichia coli O157: H7, listeria monocytogenes, vibrio parahaemolyticus, salmonella na bacillus cereus.
Mycoplasma pneumoniae ngwa nchoputa acid
A na-eji MP Nucleic Acid Detection Kit mee nchọpụta DNA Mycoplasma pneumoniae na nasopharyngeal swabs na bronchoalveolar lavage.
Ngwaahịa a na-eji maka qualitative nchọpụta nke influenza A virus na influenza B virus nucleic acid na akpịrị swab na sputum nke ndị ọrịa na vitro.
Company'slọ ọrụ ahụ mepụtara ọhụụ ọhụụ nucleic acid na-achọpụta ngwa ngwa --- ASEA teknụzụ bụ teknụzụ nchọpụta ngwa ngwa, dị mfe na ngwa ngwa ngwa ngwa usoro niile sitere na "nlele iji rụpụta" nwere ike mezue na nkeji 35, na-achọpụta ọganihu dị mkpa. na nchọpụta nucleic acid site na "ọkwa elekere" ruo "ọkwa nkeji".
Ezigbo, ngwa ngwa, obere ma dị mfe iji teknụzụ mmụba nke Isothermal bụ teknụzụ amplification ọhụrụ nucleic acid (gene). Dika ihe omimi nke ihe omimi na ihe omimi, usoro mmeghachi omume na-adi mgbe nile na-ekpo oku, site na enzymes na primers a kapịrị ọnụ iji nweta nzube nke amplification ngwa ngwa nke acidic nucleic.
Maka ichebe na inactivation nke nje virus (Edị E), mmịpụta ngwa ngwa nke nucleic acid (DNA / RNA) (Sdị S / Type E), a ga-eji ngwaahịa ahụ maka nyocha ahụike na IVD.
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nchọpụta Total Solution
ASEA teknụzụ, ọgbọ ọhụụ nke nucleic acid na-achọpụta ngwa ngwa na nyocha nke onwe ya nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara, bụ teknụzụ nyocha ngwa ngwa, ngwa ngwa na ngwa ngwa nuklia acid, nke nwere ike mezue usoro ahụ niile site na "nyocha na nsonaazụ" na nkeji 35, wee ghọta mmụba dị ịrịba ama nke nchọpụta nucleic acid site na "ọkwa elekere" ruo "ọkwa nkeji".
Iji teknụzụ na-ekpo ọkụ nke semiconductor, nd360 fluorescent quantitative PCR instrument nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa PCR ngwa ngwa, ma chọpụta oge nrịba ọkụ ọkụ site na usoro redio na telivishọn dị elu, ma nyochaa na nhazi site na ngwanrọ nyocha dị ike.
Ọgbọ ọhụụ nke teknụzụ nchọpụta ngwangwa nke nucleic acid bụ teknụzụ a na-achọpụta ngwa ngwa nucleic acid bụ teknụzụ nchọpụta ngwa ngwa ngwa ngwa nke onwe ya mepụtara site nederbio maka mkpa nke nyocha ngwa ngwa na saịtị ahụ, nke nwere ike ịnye ezi, ngwa ngwa, kensinammuo na Qualitative nucleic acid nchọpụta Nsonaazụ.
Copyright - 2010-2020: All Rights echekwabara. Ngwa ule China na-agba ọsọ, Osisi Parvovirus (Cp), Mwepu-Free Kit, Ngwa Ngwa Mgbapụta Acid Acid,